वैदेशिक रोजगारीले पतिपत्नीको सम्बन्धमा दरार
आत्मिय कुराकानी गर्दा समस्या कम हुन्छः मनोपरामर्शदाता बिजुक्छे (कुराकानीसहित)
प्रकाशित मिति: 2017-11-02
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार भारतमा करिब ४० लाख र त्यसबाहेकका मुलुकमा ३७ लाख नेपाली पुगेका छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशिएका नेपालीहरुका कारण रेमिट्यान्स मात्र भित्रिएको छैन,पारिवारिक विघटनका घटनाहरु पनि समाजमा देखिने गरेका छन् । पतिपत्नीहरुबीचको सम्बन्धमा देखिने दरार संख्यात्मक रुपमा बढ्दै गएको छ । पति वा पत्नी वैदेशिक रोजगारमा जाँदा उत्पन्न हुने व्यथितिलाई मनोबिमर्शकर्ता विजया विजुक्क्छेले नजिकबाट नियाल्दै आउनु भएको छ। महिलाहरुको क्षमता विकास र मानसिक सुस्वास्थ्यका क्षेत्रमा क्रियाशिल संस्था (अब्बल वी ) का कार्यकारी निर्देशक समेत रहनु भएका विजुक्क्छेसँग लिलप्रकाश चन्दले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध स्वस्थ राख्ने उपायका बारेमा कुराकानी गर्नु भएको छः
वैदेशिक रोजगारीमा पति वा पत्नी जाँदा घरमा रहेकाहरुलाई मनोपरामर्श दिदा तपाईले थाहा पाएको कुरा के हो ?
मैले सिकेको कुरा के हो त भन्दाखेरी वैदेशिक रोजगारीमा जानुहुन्छ ठिक छ, तर टाढाको सम्बन्धलाई कसरी मेन्टेन गर्ने भन्ने कुराको जानकारी दुवै जनामा रहनुपर्यो । म आइरहेको छु, यहाँ कमाइदिरहेको छु, पैसा पठाइरहेको छु , त्यति भए भइहाल्यो नि भन्ने कुरा चाँही हुँदैन । त्यो भन्दा पनि अरु आवश्यकताहरु हुन्छन् । आफूलाई दुःख पर्दाखेरी समातेर रुने मान्छे चाहिन्छ । आफ्नो कुराहरु कसैलाई बताउन नसक्दाखेरी बुझिदिने मान्छे चाहियो । शारीरिक आवश्यकता हुन्छ । यी सबै समस्या त हो तर यसलाई हामीले व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छौँ ।
पति वा पत्नी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा बहुसम्बन्ध कायम हुनु भनेको दुःख पर्दा रुने र साथ दिने मान्छे नभएर हो कि अरु पनि कारणहरु हुन्छ ?
नेपालमा रहने पक्षले बहुसम्बन्ध कायमै राख्नुमा एकदमै महत्वपूर्ण स्थान दुःख पर्दा रुने र सँगै हुने मानिस नभएर नै हो । 'कसले मलाई बुझिदिन्छ, आवश्यकता पर्दा को आइदिन्छ त, सबै जना त आआफ्नो ठाउँमा व्यस्त हुन्छ । ' भन्ने महसुस घरमा रहनेलाई हुन्छ ।
घरमा भएको पति वा पत्नीलाई दुःख र आवश्यक पर्यो भनेर घर फर्कने स्थिति भनेको बेलामा नबन्न सक्छ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?
समयमा कुरा गर्नुपर्यो । 'यो समयमा म कुरा गर्छु । ' भनेर निश्चित गर्नुपर्यो । 'म आज सपिङमा गएँ, यो, यो किनेर ल्याएँ ।' भनेर कसैले सुनायो भने पनि उत्साहित भएर, ध्यायन दिएर सुनिदिनुपर्यो । अहिले त थुप्रैखालका सुविधाहरु छन् । समयमा नै भिडियो कुराकानी गर्न सकिन्छ । मिलेसम्म र छुट्टि पाएसम्म एकअर्कालाई भेट्न आउनुपर्यो ।
त्यति भयो भने पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध ठिक हुन्छ त ?
ठिक हुनको लागि धेरै सहयोग पुग्छ । कोही त गलतै गर्छु भनेर हिड्ने पनि हुन्छन् त्यसलाई यसले नसमेट्न पनि सक्छ । नजानीनजानी फस्नेहरु पनि हुन्छन् । पछिल्लो पटक मैले काउन्सिलिङ गरिरहेको छु, उहाँले भन्नुहुन्छ 'मलाई एकदमै श्रीमानको माया लाग्छ, धोका दिन मन छैन । तर मलाई राम्रोसँग रेसपोन्स नै गर्दैन, खाली पैसा पठाइदिएँ है भन्छ, झर्केर बोलिरहेको हुन्छ । मैले फोन गरेर कहाँ हुनुहुन्छ भन्दा अहिले फोन राख भन्नुहुन्छ । अनि त्यस्तो बेला मैले के गर्नु र । बोल्दाखेरी पनि मैले दुःख दिएँ कि क्या हो जस्तो लाग्छ । अनि त्यही भएर मात्र हो । हैन उहाँ फर्केर आउनु हुन्छ भने यो मान्छेलाई छोड्दिन्छु मलाई केही समस्या छैन । मैले यो जानेर गरेको होइन । मलाई पनि हिन भावना आउँछ त्यही भएर काउन्सिलिङमा बसेको भन्नुहुन्छ ।' यस्तो खालको समस्या लिएर बस्नेहरु धेरै हुनुहुन्छ । श्रीमानले थाहा पायो भनेर के होला, भनेर डराउनेहरुले आत्महत्याको बाटो रोजेको पनि पाइन्छ । जे पर्ला पर्ला म त छोड्दिन्छु भन्नेहरुले यो बाटो रोज्दैनन् ।
पति वा पत्नी को धेरै विचलित भएर बहु सम्बन्ध स्थापित गर्दा रहेछन्, तपाईले के पाउनुभयो ?
महिला र पुरुष दुवैमा यस्तो देखिन्छ । कसैलाई यस्तो सम्बन्ध राखेकामा पश्चाताप पनि छ । 'छुट्नुपर्यो, कसरी हुन्छ। ' भनेर पनि आउनुहुन्छ । कोही भने 'कसरी छोड्ने ' भनेर पनि सोध्नु आउनुहुन्छ । अरुसँग लागेर पनि विदेशमा भएको श्रीमानलाई एकदमै माया नै गर्नेहरु पनि भेटिन्छन् । यदि यस्तो हो भने त फर्काएर राख्नु नै राम्रो हुन्छ ।
जुन आवश्यक्ता पति वा पत्नीबीच भौतिक रुपमा उपस्थित नभइ पूरा हुन कठिन छ, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
हामीले के बुझौँ भने, जो मानिसप्रति हामी माया गर्छौँ, उसैसँग नजिक हुनका लागि कोसिस गर्छौँ । बायोलोजिकल निड वा शारीरिक सम्बन्ध पनि जोलाई माया गर्छौँ उसैसँग मात्रै हामी खोज्छौँ नि । जो पायो त्यहीसँग त संभव पनि हुँदैन । त्यसकारणले हामी यदि आत्मिय कुराकानी वा टाढै भए पनि फोनको माध्यमबाट एकअर्कालाई बुझ्न सक्छौँ । एकले अर्कोलाई बुझिराखेपछि त माया टाढै हुँदैन नि । यस्तो मायाले शारीरिक आवश्यकतालाई पनि जित्छ । 'म पनि कति याद गर्छु, मलाई तिम्रो कति माया लाग्छ, सँगै भएको भए हामी कति खुसी हुन्थ्यौँ होला, तै पनि बच्चाहरुको लागि भिवष्यको लागि हामी दुःख गरौँ, ठिकै छ केही वर्षमा फर्कन्छु कमाएर । ' यस्ता कुराकानी हुँदा हर्मोनल सिक्रेसन भन्यौँ नि हामीले त्यसमा रिलिफ महसुस हुन्छ ।
भनेपछि पतिपत्नी एकअर्काबाट टाढा हुँदा कुराकानी गरिरहनुपर्यो ?
' म टाढा भए पनि तिम्रै लागि म छु है । ' भन्ने कुराको महसुस् भयो भने मात्रै पनि शारीरिक आवश्यकतालाई अर्थहिन बनाइदिन्छ ।
दिनदिनै फोन गरेर कुराकानी गर्दा कमाउन गएको मानिसलाई कत्तिको सहज होला ?
एउटा कुरा के बुझम् भने दुईचार पैसा बचाउने चक्करमा आफ्नो श्रीमान वा श्रीमति नै लखेटिने अवस्थामा छन् भने दुईचार रुपैँयाको लोभ गर्न भएन । एक महिनामा म यति फोनमा खर्च गर्छु भनेर बजेटिङ गर्नुपर्यो । परिवार सुरक्षित र स्वस्थ रहोस् भन्ने लाग्छ भने त समय पनि र बजेट पनि मिलाउनुपर्यो ।
करिब ५० लाख मानिस विदेशमा छन्, सबैमा यस्तो समस्या त पक्कै छैन होला नि ?
कतिको बाहिर आएको छ, कतिको आएको छैन तर प्रायः धेरैको समस्या छ । एउटा अर्को समस्या के छ भने निम्न आयस्तरभएकाहरुमा पैसा बाहिरबाट पठाएपछि स्तरबृद्धि हुन्छ, त्यसपछि हाइफाइ देखाउनका लागि र माथिल्लोस्तरमा पुगेकाहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने नाउमा नराम्रो आनिबानीमा लाग्ने गरेको पाइन्छ ।
गलत काम गर्नु हुँदैन भन्ने त सबैलाई थाहा हुन्छ फेरि मानिसहरु सही बाटोमा लाग्नबाट चुक्छन्, आफैले आफैलाई थाम्ने कुनै उपाय हुँदैन ?
होस् आउँदासम्म त थाम्न सकिन्छ तर होस् आउँदा धेरै कुरा छुटिसकेको पनि हुनसक्छ । यसका लागि अर्को एक जना मानिसले गाइड गर्नुपर्ने हुन्छ । परिवारका कुनै सदस्यले पनि हेरिदिनुपर्यो ।
फोनमा कुराकानी नर्दा पनि समस्या हुने, कतिपयले फेरि आवश्यकता भन्दा धेरै फोनमा कुराकानी गरेर तनाव दिराखेको देखिन्छ नि ?
त्यस्को लागि विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । जानुभन्दा अघि नै 'म तिम्रो लागि के हुँ, तिमी मेरो लागि के हो, हामी एकअर्काको महत्व के छ । ' भन्ने बारेमा छलफल गरेर जानुपर्छ । 'ल म गएँ है, पैसा पठाइदिन्छु । ' भनेर भएन । खुलेर कुरा गर्नुपर्यो । मनमनै माया गरेर भएन, माया गर्छ है भन्ने माया लिने मान्छेलाई पनि थाहा हुनुपर्यो ।
पारिवारिक विघटनको अवस्था आउन नदिन अभिभावकहरुको कस्तो प्रकारको भूमिका आवश्यक हुन्छ ?
यदि परिवारहरु सँगै छन् भने यसबाट सहयोग नै हुन्छ तर परिवारका सदस्य सहयोगी हुनुपर्यो । श्रीमान विदेश गएर पैसा पठाउन थालेपछि बच्चा पढाउनका लागि श्रीमति एक्लै सहर पस्नेहरु पनि धेरै देखिएको छ ।
बच्चा पढाउनका लागि सहर पस्दा गलत सँगतमा फस्ने खतरा पनि हुन्छ तैले यस्तो गरिस्, उस्तो गरिस् भनेर गाली गर्दा उसमा हिन भावना जाग्न सक्छ । ' यस्तो हुन्छ तर पनि परिवार हो , हामी आफ्नै हौँ, जे सही त्यही कुरा गर्न पाए हुन्थ्यो । तिमीहरु अहिले मेरो लागि जरुरी छ । ' भनेर उलाई स्वीकार्न सकिउँ भने त्यसले राम्रो रिजल्ट दिन्छ । परिवार विघटन हुन दिदैन । होइन नभएको कुरामा पनि आरोप लगाउनु भने हुँदैन, यसबाट नतिजा राम्रो आउँदैन ।
कुराकानी सुन्नका लागि तलको लिङ्कमा जानुहोस्ः